Laura Indolfi: ပန်ကရိယ ကင်ဆာကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှုထဲက သတင်းကောင်း။ - English-Video.net
Laura Indolfi: ပန်ကရိယ ကင်ဆာကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှုထဲက သတင်းကောင်း။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ပန်ကရိယ ကင်ဆာဆီမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးသူ မည်သူမဆိုသိနေတာက သူ့အတိုင်းသာဆို ကျန်းမာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ အြမန်နှုန်းကို သိကြပါတယ်။ TED ဝိုင်တော်သားနဲ့ ဇီဝဆေးပညာ စွန့်ဦးထွင်ဖြစ်သူ Laura Indolfi ဟာ ဒီရှုပ်ထွေးပြီး အသက်သေလောက်တဲ့ ရောဂါကို ကုသဖို့ ပြောင်းလဲပြုပြင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို တိုးတက်တီထွင်နေပါတယ်။ အသားပိုရှိရာနေရာမှာ လှောင်အိမ်တစ်ခုလို လုပ်ဆောင်တဲ့ ရောဂါ ပြန့်ပွားခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး ဆေးကို လိုအပ်တဲ့နေရာကိုပဲပို့ဆောင်တဲ့ ဆေးဝါးပို့ဆောင်ရေး ကိရိယာတစ်ခုပါ။ သူမပြောတာက တစ်နေ့မှာတော့ ပန်ကရိယ ကင်ဆာကို ကုသလို့ရနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်အောင် ကျွန်မတို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
By raising your hand,
at least one person on the screen?
Wow, it's almostafull house.
အိုး ခန်းလုံးပြည့် နီးပါးပါလား။
It's true, they are very famous
မှန်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ နယ်ပယ်မှာ
all of them have in common?
သူတို့အားလုံးမှာ တူတာတစ်ခုကို သိကြလား။
They all died of pancreatic cancer.
However, although it's very,
very sad this news,
it's also thanks to their personal stories
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေး ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့
that we have raised awareness
of how lethal this disease can be.
ဒီရောဂါဟာ ဘယ်ပုံအသက်ကို သေစေ
နိုင်တာ ကျွန်မတို့ သိမြင်နိုးကြားကြတာပါ။
It's become the third cause
of cancer deaths,
ဒါဟာ ကင်ဆာနဲ့ သေဆုံးမှုတွေရဲ့
and only eight percent of the patients
will survive beyond five years.
That'savery tiny number,
ဒါက အရမ်းနည်းတဲ့ အရေအတွက်ပါ၊
especially if you compare it
အထူးသဖြင့် ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်
where the survival rate
is almost 90 percent.
So it doesn't really come asasurprise
that being diagnosed
means facing an almost
certain death sentence.
သိလာရသလို ဖြစ်တာ ဘာမှ
What's shocking, though,
is that in the last 40 years,
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ အတွင်းမှာ
this number hasn't changedabit,
ဒီအရေအတွက်က နည်းနည်းမှ မပြောင်းတာပါ၊
while much more progress has been made
ဒါက အခြားသော အသားပို
with other types of tumors.
So how can we make pancreatic cancer
treatment more effective?
ဒီတော့ ပန်ကရိယကင်ဆာ ကုသမှု
Asabiomedical entrepreneur,
ဇီဝဆေးပညာ စွန့်ဦးထွင်တစ်ဦး အနေနဲ့
I like to work on problems
that seem impossible,
မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ ပြဿနာကို
understanding their limitations
၎င်းတို့ရဲ့ အကန့်အသတ်တွေကို နားလည်ရင်း
and trying to find new,
၎င်းတို့ရဲ့ ရလဒ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့
that can change their outcome.
The first piece of bad news
is that your pancreas is in the middle
of your belly, literally.
It's depicted in orange on the screen.
But you can barely see it
ဒါပေမဲ့ အရှေ့က အခြားအင်္ဂါတွေကို
until I remove all the other
organs in front.
မဖယ်ခင်ထိတော့ မြင်ရရုံ သက်သက်ပါပဲ။
It's also surrounded
by many other vital organs,
အခြား အရေးပါတဲ့ အင်္ဂါများစွာနဲ့
like the liver, the stomach,
And the ability of the tumor
to grow into those organs
is the reason why pancreatic cancer
ပန်ကရိယ ကင်ဆာဟာ အနာကျင်ဆုံး အသားပို
is one of the most painful tumor types.
The hard-to-reach location
also prevents the doctor
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဒါကို ခွဲစိတ်
from surgically removing it,
as is routinely done
for breast cancer, for example.
So all of these reasons leave
chemotherapy as the only option
for the pancreatic cancer patient.
ဓာတ်ကင်တာပဲ ရွေးချယ်စရာ အဖြစ်ကျန်စေပါတယ်။
This brings us to the second
piece of bad news.
Pancreatic cancer tumors have
very few blood vessels.
about the blood vessel ofatumor?
ဘာလို့ အသားပိုရဲ့ သွေးကြောကို
how chemotherapy works.
The drug is injected in the vein
ဆေးဝါးကို အကြောထဲ ထိူးသွင်းပြီး
and it navigates throughout the body
until it reaches the tumor site.
ဒါက ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက် အသားပိုရှိရာ
It's like driving onahighway,
trying to reachadestination.
ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစာရင်း အမြန်
But what if your destination
doesn't have an exit on the highway?
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ပန်းတိုင်က အမြန်လမ်း
အဲဒီကို ဘယ်တော့မှ မရောက်ဘူးလေ။
And that's exactly the same problem
for chemotherapy and pancreatic cancer.
The drugs navigate
throughout all of your body.
They will reach healthy organs,
resulting in high toxic effect
for the patients overall,
အဘက်ဘက်နေ လူနာတွေအတွက် မြင့်မားတဲ့
but very little will go to the tumor.
Therefore, the efficacy is very limited.
ဒါကြောင့် အာနိသင်က အကန့်အသတ်ရှိတာပါ။
To me, it seems very counterintuitive
to haveawhole-body treatment
ကျွန်တော့အမြင် သတ်မှတ်တဲ့ အင်္ဂါကို
ပစ်မှတ်ထားဖို့ တစ်ကိုယ်လုံး ကုသမှုဆိုတာက
to targetaspecific organ.
However, in the last 40 years,
ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ အတွင်းမှာ
a lot of money, research
and effort have gone towards
ပန်ကရိယာကင်ဆာ ကုသဖို့ စွမ်းအားကောင်း
တဲ့ ဆေးသစ်တွေရှာတာမှာ ငွေ၊ သုသေသနနဲ့
finding new, powerful drugs
to treat pancreatic cancer,
အားထုတ်ထုတ်မှုတွေ အများကြီး ရောက်သွားပေမဲ့
in changing the way
ဆေးတွေကို လူနာတွေဆီ ပုံ့ဆောင်ဖို့
we deliver them to the patient.
နည်းလမ်းပြောင်းတာမှာ ဘာမှ လုပ်မထားပါဘူး။
So after two pieces of bad news,
ဒီတော့ သတင်းဆိုး နှစ်ခုပြီးတော့
Withacollaborator at MIT
MIT နဲ့ Boston က
General Hospital in Boston,
Massachusetts General Hospital က
the way we treat cancer
by making localized
drug deliveryareality.
We are basically parachuting you
on top of your destination,
avoiding your having to drive
all around the highway.
We have embedded the drug
into devices that look like this one.
They are flexible enough
that they can be folded
၎င်းတို့ဟာ ပြွန်လေးထဲမှာ အံကျဖို့
to fit into the catheter,
so the doctor can implant it
directly on top of the tumor
ဒါနဲ့ အနည်းအကျဉ်း ထိုးစိုက်၊
ခွဲစိတ်မှုနဲ့ ဆရာဝန်ဟာ အသားပိုရဲ့ထိပ်မှာ
with minimally invasive surgery.
But they are solid enough
that once they are positioned
ဒါပေမဲ့ အသားပိုထိပ်မှာ နေရာချပြီးတာနဲ့
on top of the tumor,
they will act asacage.
physically prevent the tumor
တကယ်ပဲ အသားပိုကို အခြား အင်္ဂါတွေ
from entering other organs,
controlling the metastasis.
The devices are also biodegradable.
ကိရိယာတွေက ဆွေးမြေ့ ပျက်စီးနိုင်ပါသေးတယ်။
That means that once in the body,
ဆိုလိုတာ​က ကိုယ်ခန္ဓာထဲ ရောက်တာနဲ့
they start dissolving,
delivering the drug only locally,
slowly and more effectively
လက်ရှိ တစ်ကိုယ်လုံး ကုသမှုထက်
than what is done with the current
နှေးနှေးနဲ့ ပိုထိရောက်စွာ ပို့နေပါတယ်။
In pre-clinical study,
that this localized approach
နညိးလမ်းဟာ ကုသမှုကို တုံ့ပြန်ရာမှာ ၁၂ ဆ
is able to improve by 12 times
So we tookadrug that is already known
ဒီတော့ ကိုယ်သိပြီးသား ဆေးဝါးကိုယူပြီး
and by just delivering it locally
where it's needed the most,
we allowaresponse
that is 12 times more powerful,
၁၂ ဆ ပိုအားကောင်းပြီး စနစ်ကျတဲ့
အဆိပ် သက်ရောက်မှုကို လျှော့ခြင်းနဲ့
reducing the systemic toxic effect.
We are working relentlessly to bring
this technology to the next level.
ယူဆောင်ဖို့ မဆုတ်မနစ် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
We are finalizing the pre-clinical testing
and the animal model required
prior to asking the FDA for approval
ကုသမှု စမ်းသပ်ခြင်းတွေအတွက် FDA
ထောက်ခံချက် မတောင်းခံမီ တိရိစ္ဆာန်
Currently, the majority of patients
will die from pancreatic cancer.
We are hoping that one day,
မျှော်လင့်နေတာက တစ်နေ့ ကျွန်မတို့ဟာ
we can reduce their pain,
သူတို့ရဲ့ နာကျင်မှုကို လျှော့နိုင်၊
and potentially make pancreatic cancer
a curable disease.
By rethinking the way we deliver the drug,
ကျွန်မတို့ ဆေးဝါး ပို့ဆောင်ပုံကို
more powerful and less toxic,
ဒါကို ပိုအစွမ်းရှိပြီး အဆိပ်ဖြစ်တာ
we are also opening the door
to finding new innovative solutions
ဒါကိုလွန်ပြီး အခြား မဖြစ်နိုင်လုနီးပါး
for almost all other impossible problems
ပြဿနာအားလုံးအတွက် ဆန်းသစ်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်း
in pancreatic cancer patients and beyond.
Laura Indolfi: ပန်ကရိယ ကင်ဆာကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှုထဲက သတင်းကောင်း။ | TED Talk | TED.com